एक्सेस एजुकेसन फेयर भदौ २१ गते पोखरामा – Arthik Awaj
एक्सेस एजुकेसन फेयर भदौ २१ गते पोखरामा
By आर्थिक आवाज २०७५ भाद्र १५ गते शुक्रबार ०५:३५ मा प्रकाशित
पोखरा, १५ भदौ । एक्सेस एजुकेसन नेटवर्क पोखराले ‘एक्सेस एजुकेसन फेयर’ आयोजना गरेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडा जान इच्छुक विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लक्षित गरी भदौ २१ (सेप्टेम्बर ६) गते बिहीबार फेयर आयोजना गरिएको एक्सेसका पोखरा शाखा निर्देशक राजन भण्डारीले जानकारी दिए । सिटी स्क्वायर बैंक्युट न्युरोडमा आयोजित फेयरको तयारीलाई तिब्र बनाइएको उनले बताए ।
अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडाका करिब २६ वटा युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधि फेयरमा सहभागी हुनेछन् । ‘उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडा जान चाहने विद्यार्थीका लागि फेयर निकै उपलब्धीपूर्ण हुनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘तीनै देशका उत्कृष्ट कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि सहभागी हुने हुँदा विद्यार्थीहरु फेयरबाट लाभान्वित हुनेछन् ।’ एउटै स्थानमा धेरै कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष भेटेर सही परामर्श लिने अवसर मिल्ने उनले बताए ।
अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडा गएर कुन कलेज तथा युनिभर्सिटीमा कुन विषय पढ्दा भविश्य राम्रो हुन्छ ? करियर कस्तो हुन्छ ? पिआर लिने प्रक्रिया के छ ? जानका लागि के कस्ता प्रक्रिया छन् ? डकुमेन्टेसन कस्तो हुनुपर्छ ? लगायतका प्रश्नको सही जवाफ फेयरमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिइने काउन्सेलर रोशन अधिकारीले बताए । स्पट एसेसमेन्टको सुविधा समेत रहेको फेयरमा विद्यार्थीलाई स्कलरसिपको सुविधा पनि उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
फेयरमा सहभागी विद्यार्थीलाई आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । फेयरमा सहभागी भइ सही परामर्श लिन एक्सेसका प्रवन्ध निर्देशक पुष्पराज पौड्यालले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन् ।